Semalt: 3 Traffic-Driving SEO Fomba Tokony ho Fantatrao
Search Engine Optimization (SEO) dia fomban'ny fampivoarana ny fizotry ny habaka ao amin'ny tranonkala. Ampiasaina tsikelikely ny ankamaroan'ny fikambanana madinika. Teknika izany izay ahafahan'ny orinasa na tranonkala mahazo ny laza eo amin'ireo mpividy ary afaka manatsara ny tombontsoany. Raha toa ka manana orinasa iray izay mila tranonkala iray hananganana avo lenta amin'ny mpilalao horonan-tsarimihetsika amin'ny Internet ianao, dia tokony hampiasa amina orinasa goavam-be ao amin'ny tranonkala ianao mba hampivoarana ny tranokalanao.
Frank Abagnale, Mpanantanteraka Success Manager Semalt Digital Services, dia mamaritra karazana fomba sy fomba fiasa samihafa SEO izay tokony eritreretinao alohan'ny handehananao amin'ny SEO.
Fotsy fotsy SEO dia toerana iray amin'ireo fomba fiasa malaza indrindra momba ny fanatsarana ny endriny ary iray amin'ny fampiasana paikady sy fomba hampivoarana ny fikarohana mpikaroka Internet amin'ny tranokala iray izay tsy manara-dàlana amin'ny fitsipiky ny Internet - hospedagem de sites revenda. Ny ampahany amin'ireo rafitra izay fotsy manana fitaovana fitiliana fanatsarana ny fitiliana dia ny fampiasana ny fampitomboana ny fanitarana an-tsokosoko lehibe indrindra, ny fampitomboana ny HTML, ny famokarana, ny ezaka amin'ny tanana ary ny fikarohana. Rehefa mifidy an'io teknika ho an'ny SEO io ​​ianao, dia afaka miandrandra ny fampandrosoana amin'ny lalao.
Black hat SEO dia karazana fandehan-tranonkala iray izay manatsara ny fahadisoana samihafa amin'ny fitaovana na ny fitaovan'ny fikarohana ao anaty tranonkala miaraka amin'ny tanjona voafaritra tsara mba hizarana loka goavana ho an'ny toerana. Ity karazam-pitsipika momba ny SEO ity dia tsy mitovy amin'ny fitsipika fanamafisana ny tranonkala noforonin'ny fitaovam-pikarohana web ary indrindra an'i Google. Rehefa mifidy an'io paikady io ianao, dia afaka manantena ny fampiroboroboana am-pirahalahiana, tsy misy fohy nefa maharitra.
Grey hats SEO dia karazana sariohatra fitadiavana izay tsy fotsy na mainty. Izany dia rafitra iray izay tsy manararaotra tanteraka ny tranonkala mainty hoditra ary manatsara ny roa. Na inona na inona noho ny hery avy amin'ny tranokalam-pifaneraserana na ny fandaminana na hampitomboana ny vokatra tsara kokoa, ny fikambanam-panatontosana tranonkala sasany dia mety hanala ny Gray SEO amin'ny sehatra sasany.
Hatramin'izao dia fantatrao ny fomba amam-panao sy ny teknika fampandrosoana hafa amin'ny famolavolana tranonkala, tokony hifidy izay tena mifanaraka aminao ianao. Zava-dehibe ny fisafidianana ny fanatsarana ny tranokala na ny orinasa fananganana tranonkala, izay manandrana ny maka aina an-tseraseran'ny tranonkala fotsy mba hitazomana ny fitsipika rehetra ary hanolotra anao amin'ny fitadiavana fikarohana goavana ho an'ny fikarohana.